လေဘာပါတီ ခေါင်းဆောင်သစ်အတွက် စိန်ခေါ်မှုများ
6 เม.ย. 2563 - 16:53 น.
မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၈ သိန်းနီးပါး ရှိတဲ့အထဲက ငါးသိန်းနီးပါး မဲပေးခဲ့ကြပြီး ဆာ ကီယာက မဲရာခိုင်းနှုန်း ၅၀ ကျော်ရရှိပြီး အနိုင်ရခဲ့
လေဘာပါတီခေါင်းဆောင်သစ် ရွေးချယ်မှုကာလ သုံးလအပြီးမှာ ဆာဘွဲ့ရ ကီယာ စတာမာ က လေဘာပါတီ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာကြောင်း ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့မှာ ကြေညာချက် ထွက်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လေဘာခေါင်းဆောင်သစ်ကို ညီလာခံပြုလုပ်ပြီး ကြေညာဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့် ယူကေမှာ ကိုဗစ်၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အခြေအနေတွေကြောင့် အီးမေးကနေပဲ ခေါင်းဆောင်သစ် ကြေညာမှုကိုလုပ်ဖို့ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။
လေဘာခေါင်းဆောင်သစ်နေရာအတွက် ပါတီဝင်တွေ၊ လေဘာထောက်ခံတဲ့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေနဲ့ အခြား ထောက်ခံသူ စာရင်းသွင်းထားသူတွေက မဲပေးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
အခုလို မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၈ သိန်းနီးပါး ရှိတဲ့အထဲက ငါးသိန်းနီးပါး မဲပေးခဲ့ကြပြီး ဆာ ကီယာက မဲရာခိုင်းနှုန်း ၅၀ ကျော်ရရှိပြီး အနိုင်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆာ ကီယာဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကစလို့ ဟိုလ်ဘွန်းနဲ့ စိန့်ပန်းခရိယက်စ် မဲဆန္ဒနယ် အမတ်အဖြစ် တောက်လျှောက်အရွေးခံ ခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂက ထွက်ရေးဆိုင်ရာ အတိုက်အခံ ဝန်ကြီးနေရာကို ရခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ လေဘာပါတီတွင်း ဘဏ္ဍာရေး အတိုက်အခံ ဒုဝန်ကြီး ဖြစ်ခဲ့သူ ရေဘက္ကာ လောင်းဘေလီနဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ အတိုက်အခံ ဝန်ကြီး ဖြစ်ခဲ့သူ လီဆာ နန်ဒီ တို့နဲ့ အပြိုင် အရွေးခံအပြီး အနိုင်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆာ ကီယာ အခုလို အနိုင်ရအပြီးမှာ လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်နဲ့လည်း စကားပြောခဲ့ပြီး လက်ရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ် ထပ်မံ ဆွေးနွေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ယူကေ အာဏာရပါတီ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအများစုနဲ့ အနိုင်ရ
အတိုက်အခံပါတီမှာ ခေါင်းဆောင်သစ် တက်လာရင် စာနယ်ဇင်းသမားတွေရဲ့ စုပြုံအာရုံစိုက်မှု ရလေ့ရှိပေမယ့် အခုလို ကာလမျိုးမှာတော့ သူ့အသံ အများသိအောင် လုပ်ဖို့ ခက်နိုင်
လေဘာခေါင်းဆောင်သစ် ရင်ဆိုင်ရမယ့် စိန်ခေါ်မှုများ
ဘီဘီစီ နိုင်ငံရေးသတင်းထောက် ဘရိုင်ယန် ဝှီလာရဲ့ သုံးသပ်ချက်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကိုဗစ်၁၉ ရဲ့ စိန်ခေါ်မှု
ဆာ ကီယာ စတာမာ ဟာ သူ့ရဲ့ လေဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့ မဲဆွယ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီအတွင်းမှာ သူသာ လေဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရင် ခိုင်မာတဲ့ မူမရှိတဲ့ လက်ရှိ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ကို အောက်လွှတ်တော်မှာ ဝေဖန်ပြီး တွန်းအားပေးမယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း ယူကေနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်၁၉ ဖြစ်ပွားမှုတွေ များလာပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင် ဒီရောဂါ ကူးသွားလို့ အိမ်မှာ သီးခြားခွဲနေ လိုက်ရပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆာ ကီယာ အနေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှု မဆန်အောင်နဲ့ နိုင်ငံရေး အသာရချင်လို့ ဝေဖန်ပြတာမျိုး လုပ်ဖို့ ခက်သွားပါပြီ။
သူရဲ့ အနိုင်ရ အမှာစကားမှာလည်း အတိုက်အခံ ပါတီ တာဝန်အရ အတိုက်အခံ လုပ်နေရုံ သက်သက် မဟုတ်ပဲ အစိုးရနဲ့ အပြုသဘော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး အစိုးရဘက်က အမှားလုပ်တာ၊ ဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စကို မြန်မြန် အကောင်အထည် မဖော်တာမျိုးကိုတော့ ဝေဖန်သွားမယ်လို့ လေသံပြောင်းပြီး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် အဓိက အတိုက်အခံပါတီမှာ ခေါင်းဆောင်သစ် တက်လာရင် စာနယ်ဇင်းသမားတွေရဲ့ စုပြုံအာရုံစိုက်မှု ရလေ့ရှိပေမယ့် ယူကေ လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုယ်တိုင် အိမ်ကနေပဲ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အခုလို ကာလမျိုးမှာတော့ ဆာ ကီယာအတွက် သူ့အသံ အများသိအောင် လုပ်ဖို့ ခက်နိုင်ပြီး အိမ်ကနေ ဗီဒီယို လင့်နဲ့ပဲ ဝန်ကြီးချုပ်ကို မေးခွန်းထုတ်ရတဲ့ ပထမဆုံး အတိုက်အခံပါတီခေါင်းဆောင်တောင် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ လေဘာပါတီရဲ့ လမ်းစဉ် ကတိပြုချက်ကို ဆာ ကီယာက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မဝေဖန်ခဲ့ဘဲ မူဝါဒတွေ များနေတယ်လို့သာ ပြောဆိုခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့လက်ထက်မှာ ပြဌာန်းနိုင်တဲ့ ပါတီ လမ်းစဉ် ကတိပြုချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သူခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ မဲဆွယ်ကာလမှာ ကတိပေးခဲ့တာတွေကိုပဲ ကြည့်ပြီး ခန်းမှန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆာ ကီယာရဲ့ အဲဒီ မဲဆွယ်ကာလအတွင်းမှာ အချက် ၁၀ ချက်ပါတဲ့ ကတိပြုချက်တွေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အဲဒီ အထဲမှာ ယခင် ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဂျယ်ရမီ ကော်ဘင်ရဲ့ မူဝါဒတွေလည်း ဖြစ်တဲ့ မီးရထားလုပ်ငန်း၊ စာပို့လုပ်ငန်းနဲ့ ရေပေးဝေမှု လုပ်ငန်းတွေကို နိုင်ငံပိုင်ပြုရေးနဲ့ သမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကန့်သတ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပယ်ဖျက်ရေး အချက်တွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
ဆာ ကီယာ အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်ဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာ မညီမျှမှုတွေကို မလိုလားတဲ့ “စာရိတ္တရေးရာ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ” အပေါ် အခြေခံတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော်မလဲ ဆိုတဲ့ အပိုင်းကိုတော့ ဘီဘီစီ နိုင်ငံရေး အယ်ဒီတာ လော်ရာ ကွန်းစ်ဘတ်ဂ်က မေးချိန်မှာ ရေရေရာရာ မဖြေဆိုခဲ့ပါဘူး။
လေဘာပါတီအတွင်း သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကို ပါတီဝင်တွေက စိတ်ကုန်နေကြချိန်မှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ ဆာ ကီယာအတွက် ထပ်ပြီး အကွဲအပြဲ မဖြစ်စေမယ့် လမ်းစဉ်ချမှတ်နိုင်ဖို့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် အခုလို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ပြောနေရတာလို့ သုံးသပ်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဂျူးဆန့်ကျင်ရေး ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေး စိန်ခေါ်ချက်
လေဘာပါတီအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ဂျူးဆန့်ကျင်ရေး ပြဿနာဟာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ့် ပထမဆုံးနေ့မှာတင် စတင်ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆာ ကီယာက သူ့ရဲ့ မဲဆွယ်ကာလမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူ လေဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဂျူးလူမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းကို ဝမ်းနည်းစရာတွေ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ပါတီတွင်း ဂျူးဆန့်ကျင်တဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့် လေဘာပါတီကိုယ်စား တောင်းပန်ပါတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
လေဘာပါတီအတွင်းမှာ ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးဆန်တဲ့ ပြောဆိုမှုလုပ်သူ ပါတီဝင်နဲ့ အမတ်တွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကြောင့် နုတ်ထွက်သွားကြတဲ့ ဂျူးလူမျိုး ပါတီဝင်တွေလည်း ရှိခဲ့ရာမှာ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို အဲဒီ ဂျူးလူမျိုး ပါတီဝင်တွေ ပြန်ဝင်လာမှုနဲ့ တိုင်းပါ ဆိုပြီးတော့လည်း ဆာ ကီယာက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိသျှဂျူးလူမျိုးများ ကိုယ်စားပြု ဘုတ်အဖွဲ့ကတော့ လေဘာပါတီတွင်း ဂျူးဆန့်ကျင်ရေး ပြဿနာကို ခေါင်းဆောင်သစ်က လေးလအတွင်း ဖြေရှင်းပေးဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က ပြောဆိုထားပါတယ်။
ဆာ ကီယာနဲ့ အပြိုင် ခေါင်းဆောင် အရွေးခံခဲ့သူ လီဆာ နန်ဒီက နိုင်ငံခြားရေး အတိုက်အခံ ဝန်ကြီးနေရာရ (ဝဲစွန်)၊ ဆာ ကီရာ စတာမာ (အလယ်)၊ လက်ဝဲယိမ်း ရေဘက္ကာ လောင်းဘေလီ (ယာစွန်)
လေဘာထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ရွေးချယ်ရေး စိန်ခေါ်ချက်
ယခင် လေဘာပါတီခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဂျယ်ရမီ ကော်ဘင် လက်ထက်မှာရှိခဲ့တဲ့ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေကို အဆုံးသတ်ပြီး အမြင်ပေါင်းစုံရှိသူတွေ စည်းလုံးတဲ့ ပါတီဖြစ်လာအောင် လုပ်မယ်လို့ ဆာ ကီယာက ပြောဆိုထားပါတယ်။
ဒီလို ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် သူရဲ့ အတိုက်အခံ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ရွေးချယ်မှုက အဓိကကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူရွေးမယ့် ထိပ်ပိုင်းအဖွဲ့အတွင်းမှာ လေဘာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ ယှဉ်ပြိုင်စဉ်က ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူ လက်ဝဲယိမ်း ရေဘက္ကာ လောင်းဘေလီ ဆက်လက် ပါဝင်နိုင်ပြီး အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်သမားတွေလို့ ယူဆထားကြတဲ့ အလုပ်သမားနဲ့ပင်စင်ရေးရာ အတိုက်အခံ ဝန်ကြီးဟောင်း ရေချယ် ရိဗ်စ် နဲ့ ၂၀၁၅ မှာ လေဘာပါတီ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ အရွေးခံစာရင်းထဲ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အီဗက် ကူးပါး တို့လည်း ပြန်လည် ပါဝင်လာမယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
အခုလို သုံးသပ်ထားတဲ့အထဲက ရေချယ် ရိဗ်စ်ဟာ လန်ခက်စ်တာနယ်ရေးရာ အတိုက်အခံ ဝန်ကြီး အဖြစ် အရွေးခံလိုက်ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဆာ ကီယာရဲ့ နောက်ထပ် ပြိုင်ဘက်တဦးဖြစ်ပြီး သဘောထားပျော့ပျောင်းတဲ့ လက်ဝဲယိမ်းသူလို့ ယူဆခံရသူ လီဆာ နန်ဒီလည်း အလားတူ ထိပ်ပိုင်းအဖွဲ့မှာ ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။
လေဘာပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ ဆက်လက် ပါဝင်လိုတယ်လို့ အရိပ်အမြွက် ပြောဆိုထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဂျယ်ရမီ ကော်ဘင်ကိုလည်း ဆာ ကီယာ စတာမာက တနေရာ ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုနေကြပါတယ်။
ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့ ညနေမှာတော့ ဆာ ကီယာ ရဲ့ အတိုက်အခံ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်မယ့် သူတချို့ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဆာ ကီယာနဲ့ အပြိုင် ခေါင်းဆောင် အရွေးခံခဲ့သူ လီဆာ နန်ဒီက နိုင်ငံခြားရေး အတိုက်အခံ ဝန်ကြီးနေရာ၊ အောက်စဖို့အရှေ့ပိုင်း မဲဆန္ဒနယ် အမတ် အန်နာလီဆာ ဒေါ့စ်က ဘဏ္ဍာရေး အတိုက်အခံ ဝန်ကြီး နေရာနဲ့ ဝေးလ်စ်ဒေသ တော်ဗိုင်းရန်း မဲဆန္ဒနယ် အမတ် နစ်ခ် သောမတ်စ် ဆင်မန် က ပြည်ထဲရေး အတိုက်အခံ ဝန်ကြီး နေရာတွေ အရွေးခံခဲ့ရပြီး ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့မှာ ကျန်တဲ့ အတိုက်အခံ ဝန်ကြီးတွေ နေရာကို ဆက်လက် ကြေညာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေဘာပါတီ ပြန်လည် အနိုင်ရရေး စိန်ခေါ်ချက်
ဒီ စိန်ခေါ်ချက်ကတော့ ဆာ ကီယာအတွက် အခက်ဆုံးနဲ့ တခုတည်းသော တကယ် အရေးပါမယ့် စိန်ခေါ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အုတ်တံတိုင်းနီလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ အင်္ဂလန် အလယ်ပိုင်းနဲ့ မြောက်ပိုင်းက လေဘာကိုပဲ အများဆုံး မဲပေးကြလေ့ရှိတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေဟာ ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ရဲ့ ကွန်ဆားဗေးတစ်ပါတီအောက် ရောက်သွားကြတဲ့ အခြေအနေကို လေဘာပါတီက ကြုံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ယခင် ခေါင်းဆောင်ဟောင်း တိုနီဘလဲ အများစု အနိုင်ရလေ့ရှိတဲ့ စကော့တလန်မှာဆိုရင် နိုင်ထားတဲ့ နယ်အားလုံး နီးပါး လက်လွှတ်ခဲ့ရပြီး ဝေးလ်စ်နယ်မှာလည်း ယခင်ရနေကျ မဲအများအပြား ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို အခြေအနေတွေမှာ လေဘာပါတီ အနေနဲ့ မြို့တော် လန်ဒန်အပြင်ဘက်နဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် ဒေသက အလုပ်သမားလူတန်းစားရဲ့ မဲတွေ ပြန်မရဘူးဆိုရင် လေဘာပါတီအတွက် နိဂုံးတောင် ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုပြီး ကျန်းမာရေး အတိုက်အခံ ဝန်ကြီး ဂျော်နသန် အက်ရှ်ဝေါ့သ် အပါအဝင် ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ပြောဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။
ကျန်းမာရေး အတိုက်အခံ ဝန်ကြီးနေရာကတော့ အပြောင်းအလဲမရှိပဲ မစ္စတာ အက်ရှ်ဝါ့သ်ပဲ ဆက်လက် ထမ်းဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆာ ကီယာ အနေနဲ့ သူ့အစိုးရတက်လာရင် ယူကေရဲ့ နယ်အသီးသီးကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု မပါဘဲ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာတွေ ပေးမယ်လို့ ပြောဆိုထားပေမယ့် ဒီလောက် ကတိပေးရုံနဲ့ လေဘာ အာဏာရလာဖို့ မလုံလောက်ဘူးဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်လည်း သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။
"စာရိတ္တရေးရာ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ" အပေါ် အခြေခံမယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော်မလဲ ဆိုတဲ့ အပိုင်းကိုတော့ ဘီဘီစီ နိုင်ငံရေး အယ်ဒီတာ လော်ရာ ကွန်းစ်ဘတ်ဂ်က မေးချိန်မှာ ရေရေရာရာ မဖြေဆိုခဲ့
ဘီဘီစီ နိုင်ငံရေးအယ်ဒီတာ လော်ရာ ကွန်းစ်ဘတ်ဂ်ရဲ့ သုံးသပ်ချက်
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်း အရွေးခံရတဲ့ ပါတီအမတ် အရေအတွက် အနည်းဆုံး ဖြစ်သွားပြီး အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ လေးကြိမ်ဆက်တိုက် ရှုံးနိမ့်ထားတဲ့ လေဘာပါတီကို ဦးဆောင်ရမယ့် ဆာ ကီရာ စတာမာက သူ့အတွက် တောင်တက်ခရီးသွားရသလို ဖြစ်မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဆာ ကီရာဟာ သူ့ရဲ့ လေဘာခေါင်းဆောင်အဖြစ် မဲဆွယ်တဲ့ ကာလမှာ “စာရိတ္တရေးရာ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ” ကို အသားပေး ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် သူရဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ပန်းတိုင်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူနဲ့ နီးစပ်သူတွေတောင် ရေရေရာရာ မပြောနိုင်ကြဘဲ ဂျယ်ရမီ ကော်ဘင်နဲ့ ယှဉ်ရင် လက်ယာကျပြီး တိုနီဘလဲထက်တော့ လက်ဝဲပိုဆန်သူ အဖြစ်သာ သတ်မှတ် ထားနိုင်ကြပါတယ်။
သူ အခုလို ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာချိန်မှာ ပါတီကို အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်ဘက်ကို မြန်မြန် ရွေ့စေချင်တဲ့ လေဘာအမတ်တွေ ရှိသလို ဂျယ်ရမီ ကော်ဘင် ချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ သွေဖီမသွားဖို့လည်း လေဘာပါတီအတွက် စည်းရုံးရေး အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ မိုမန်တမ်နဲ့ မီးသတ်သမားများ သမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်တို့က သတိပေးနေကြပါတယ်။
ဆာ ကီယာ အနေနဲ့ကတော့ သူရဲ့ အတိုက်အခံ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ ယခင် နာမည်ရပြီးသား နိုင်ငံရေးသမားတွေထက် သွေးသစ်လောင်းပြီး လူသစ်တွေကို ထည့်ခန့် လာနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်လို ကျန်းမာရေးနဲ့ စီးပွားရေး အရေးပေါ် အခြေအနေ ကာလအတွင်း လူအများက စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ အာဏာရ ခေါင်းဆောင်တွေက ဘယ်လို ဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတာကို နားစွင့်နေတဲ့အချိန်ဟာ အဓိက အတိုက်အခံပါတီတခုအတွက် နိုင်ငံရေး အခွင့်အလမ်းတခု ဖြစ်နိုင်သလို ဒါကို မယူမိရင်တော့ အန္တရာယ် ထောင်ချောက်တခုလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အချိန်မှာ လေဘာခေါင်းဆောင်သစ် အနေနဲ့ အများပြည်သူကို ကူညီဖို့ အခွင့်အရေးရပြီး သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ တည်ဆောက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတရပ်လည်း ရနေပါတယ်။
ဆာ ကီယာ စတာမာ ရဲ့ နောက်ကြောင်း ရာဇဝင်
ဆာ ကီယာ ဟာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ လန်ဒန်မြို့ ဆောက်သတ်က် အရပ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဖခင် ရော့ဒ်က ပစ္စည်းကိရိယာ ပြုလုပ်သူနဲ့ မိခင် ဂျိုစဖင်းကတော့ သူနာပြုတဦး ဖြစ်ပါတယ်။
မွေးချင်း ၄ ယောက်ထဲက တဦးဖြစ်တဲ့ သူ့ကို နာမည်ပေးရာမှာ လေဘာပါတီအတွက် ပထမဆုံး ရွေးကောက်ခံ အမတ်ဖြစ်လာသူ ကီယာ ဟာဒီ ကို အစွဲပြုပြီး မိဘတွေက ပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
ဆာ ကီယာ ဟာ မူလတန်းအပြီး ထူးချွန်စာမေးပွဲ 11-plus ကို အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက် ရိုင်းဂိတ် ဂရမ္မာ ကျောင်းကို တက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း လိဒ်စ် တက္ကသိုလ်မှာ ဥပဒေဘာသာရပ် သင်ကြားရမှာတော့ ပထမအဆင့်နဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်ရဲ့ ကောလိပ်တခုဖြစ်တဲ့ စိန့်အက်ဒမွန် ဟောမှာ ဘွဲ့လွန်အဆင့် ဥပဒေပညာကို ဆက်လက် သင်ကြား အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆာ ကီယာဟာ ၁၉၈၆ မှာ တရားရုံးရှေ့နေ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၂၀ဝ၇ အရောက်မှာ အမှုလိုက် ရှေ့နေ ဗစ်တိုးရီးယား အလက်ဇန်းဒါးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျရာမှာ သားသမီး နှစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။
၂၀ဝ၈ ခုနှစ်မှာတော့ ဆာ ကီယာဟာ အမှု အမိန့်ချရေး တော်ဝင်ဌာနမှာ ဒါရိုက်တာသစ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၂၀၁၃မှာ ဒီရာထူးက အနားယူအပြီး တိုင်းပြည်အတွက် သူ့ရဲ့ ရာဇဝတ်မှုနဲ့ ဥပဒေရေးရာ ဝန်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ၂၀၁၄ မှာ ဗြိတိသျှ ဘုရင်မကြီးက သူရဲကောင်း ဆာဘွဲ့ ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပဲ ဟိုလ်ဘွန်းနဲ့ စိန့်ပန်းခရိယက်စ် မဲဆန္ဒနယ်မှာ လေဘာ အမတ်အဖြစ်က အငြိမ်းစားယူမယ့် ဖရန့် ဒေါ့ဘ်ဆင် နေရာအတွက် ဆာ ကီယာ အရွေးခံခဲ့ရပြီး ၂၀၁၅ ယူကေ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရပြီးမှ ပါလီမန် အမတ် စဖြစ်လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၅မှာ လေဘာ ခေါင်းဆောင်သစ်ရွေးချယ်ရာမှာ ဆာ ကီယာက ဂျယ်ရမီ ကော်ဘင်ကို မထောက်ခံခဲ့ဘဲ လက်ရှိ မန်ချက်စတာ မြို့ဝန် အန်ဒီ ဘန်ဟမ်ကို ထောက်ခံခဲ့
၂၀၁၅ ယူကေ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ အဲဒီ အချိန်က လေဘာပါတီခေါင်းဆောင် ဖြစ်တဲ့ အက်ဒ် မီလီဘန်း နုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့အတွက် ခေါင်းဆောင်သစ်ရွေးချယ်ရာမှာ ဆာ ကီယာက ဂျယ်ရမီ ကော်ဘင်ကို မထောက်ခံခဲ့ဘဲ လက်ရှိ မန်ချက်စတာ မြို့ဝန် အန်ဒီ ဘန်ဟမ်ကို ထောက်ခံခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာ ကော်ဘင်က သူလေဘာပါတီ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာချိန်မှာ ဆာ ကီယာ ကို ပြည်ထဲရေး အတိုက်အခံ ဝန်ကြီး အဖြစ် နေရာပေးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၆ မှာ ယူကေ ဥရောပသမဂ္ဂက ထွက်ဖို့ လူအများစုက မဲပေး ဆုံးဖြတ်လိုက်ရာမှာ မစ္စတာ ကော်ဘင် ရွေးချယ်ထားတဲ့ အတိုက်အခံ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် အများစုက ပါတီ ခေါင်းဆောင်လည်း တာဝန် မကင်းဘူး ဆိုပြီး အပြစ်တင်တဲ့အပြင် အတိုက်အခံ အစိုးရဝန်ကြီးတွေ အဖြစ်ကနေ နုတ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခုလို နုတ်ထွက်တဲ့ အထဲမှာ ဆာ ကီရာ စတာမာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး အဲဒီ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ ဥရောပသမဂ္ဂက ထွက်ရေးဆိုင်ရာ အတိုက်အခံ ဝန်ကြီးအဖြစ် အတိုက်အခံ အစိုးရအဖွဲ့ထဲကို ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ၂၀၁၉ လေဘာပါတီ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ချိန်မှာ ယူကေ ဥရောပသမဂ္ဂက ထွက်ရေး ဆန္ဒခံယူပွဲ နောက်တကြိမ် ထပ်လုပ်ဖို့ ထောက်ခံသူ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ယူကေ အီးယူထဲမှာ ဆက်နေရေးအတွက်လည်း ဆက်လက်စည်းရုံးမယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ လေဘာပါတီ ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ယူကေနိုင်ငံ အီးယူက ထွက်မယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို အပြီးသတ် လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဆာ ကီရာ က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ယူကေ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ စားသုံးသူတွေအတွက် အဆင့်အတန်းမီရေး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ကာကွယ်ရေးတို့အတွက် အီးယူနဲ့ ယူကေတို့ နီးစပ်တဲ့ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက် ရဖို့ ဆက်လက် ကြိုးစား စည်းရုံးမယ်လို့ သူက ပြောဆိုထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ လေဘာပါတီ ခေါင်းဆောင်သစ်အတွက် စိန်ခေါ်မှုများ